Waayeelka iyo caafimaadka | Samfunnskunnskap.no
Dhammaan dadka gaboobey ee degan Norwey waxey qaataan lacagta da’da (bisil). Lacagtan da’du way kala duwan tahay, waxaanay ku xidhantay lacagtii qofku qaadan jiray markii u hore u shaqayn jiray. Inta badan dadka waaweyn ee degan Norwey waxey degan yihiin guryahooda. Qaar ka mid ahi waxay caawinaad ka helaan degmooyikooda, sida adeegto caafimaad, adeeg guriga ah am fursad laga siiyo boos xarun maalintii la joogo. Dadka wwayeelka ah badankoodu iyaga ayaa is-debera oo isku filan ama qoyskooda ayey caawimo ka helaan.
Marka qofka weyni aanu keligiis is deberi karin ama isku filaan karin, wuxuu boos ka codsan karaa xarunta waayeelka. Laakiin kala badh dadka da’doodu ka weyn tahey 90 jir waxey deganyihiin guryaha dadka waaweyn.
Kuwa u baahan ee isticmaala adeega guriga loogu sameeyo waxey iska bixiyaan lacagta qaybtooda adeegaas. Degmaduna waxey bixisaa lacagta qaybta hadhay ee adeegaas.
Qeybka ku soo hagaageysaa inta ay le’egtahey wey kala duwan degmo ilaa degmo.
Dadka waaweyn had iyo jeer waxa haysta caafimaad daro:
Marka aynu gabowno, waxa daala jidhka. Waxa laga yaabaa in ay aad inoo xannuunaan muruqyada iyo laabatooyinku, mana karno in aan wax badan u qabano sidii hore. Tani waxa ay keeni kartaa niyad-jab iyo go’doon.
Qiyaastii 100 000 ee dadka waaweyn ee Norwey ku nool waxey la liitaan cudurka niyadjabka. Tan waxa sababi kara in caafimaadkooda guud uu ka liito sidii hore. Laakiin waxa laga yaabaa in sababtu tahey kelinimada iyo go’doonka.
Waa caadi in xasuustu ka yaraato dadka gaboobey, oo qaar badana ey xusuus la’aani ku dhacdo. Xasuus la’aantu waa xaalad ey maskaxdu dhaawacantey, oo xusuusta, dareenka nolosha iyo la xidhiidhkii bulshaduna ey dhaawacmaan.
Qaarkood waxa ka lunto baahida cuntada markay gaboobaan. Taasi waxey sababtaa nafaqo daro ama nafaqo xumo. Taasi waxey sababtaa is difaaca jidhkoodu xumaado oo si fudud cudurada iyo caabuqyo ugu dhacaan.
Caafimaadka bulshada ee Norwey aad ayey u fiicnaatay 100-kii sanno ee u danbeeyey. Tan waxa u sabab ah inta badan bulshada-daryeelka oo horumartay, taas oo keentay in badan oo badan oo fursado fiican ah si loogu noolaado nolol fiican oo xasillan. Dadka Norwey waxay nool yihiin maanta in ka badan intii ay hore u noolaan jireen. In badan oo dadka duqoobay ahi iyaguna way ka caafimaad badan yihiin sidii hore.Tani waxa ay keenaysaa fursada in la noolaado nolol fiican oo firfircoon muddo dheer.